Madaxda dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland oo wadahadal ku leh Turkiga – Radio Daljir
Madaxda dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland oo wadahadal ku leh Turkiga
Abriil 13, 2013 7:33 b 0
Ankara, Apr 13 – Waxaa maanta si rasmi ah dalka Turkiga xaruntiisa Ankara uga furmay wadahaladii madaxda dowladda faderaalka Somaaliya iyo Maamulka Somaliland oo ay martigalisay dowladda Turkiga.
Wadahaladada ay yeelanayaan labada dhinac ayaa ah mid albaabada ay u xiranyihiin , kahor inta uu shirka furmin ayaa wararka laga helayo shirka waxaa ay sheegayaan arinta aqoonsiga Somaliland ee gooni isutaageeda ayna u noqon lahayd dal ka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kalle aan lagu soo qaadi doonin shirkan.
Wasiirka arimaha dibadda Somaliland Maxamed C/laahi Cumar ayaa sheegay wadahaladan inay u badanyihiin iskaashiga labada dhinac ay yeelan karaan.
Dowladda faderaalka Somaliya iyo Somaliland ayaa si wayn ugu kala fog in laga wada hadlo doonitaanka Somaliland ee ah inay ka go’do dalka? Soomaaliya sidii ay horay ugu dhawaaqday 1991-kii.
Waa markii ugu horaysay oo madaxwaynayaasha dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland ay sitoos ah isku arkaan, wixii ka dambeeyey markii dalka Soomaaliya uu yeeshay dowladda rasmi ah oo caalamku aqoonyahay.
Madaxwaynihii hore ee dowladdii KMG ahayd Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa horay u bilaabay wadahadalka dowlada iyo maamulka Somaliland, inkastoo xiligaasi loo balamay wada hadal kale oo la yeesho si looga miri dhaliyo dadaalka caalamka uu ku bixinayo dalka Soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa.
Wixii kasoo baxa shirka wararka dambe ayaa kaga bogan doontaan
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada oo la kulmay madaxweynaha dalka Burundi (Sawiro)
Daawo Sawiradda ciyaarihii shalay ee Galkacyo